Gorgor halis ku haya nolosha magaalo kamid ah Maraykanka. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Gorgor halis ku haya nolosha magaalo kamid ah Maraykanka.
Gorgor halis ku haya nolosha magaalo kamid ah Maraykanka.
Posted by: radio himilo August 29, 2017
Muqdisho – Gorgorku waa shinbirta qaran ee dalka Maraykanka, hayeeshe badi dadka Ameerikanka ah aad bay ugu adag tahay inay arkaan inta ay nool yihiin, marka laga reebo kuwa ku nool magaalada Unalaska halkaas oo ay aad ugu badan yihiin.
Unalaska waxay guri u tahay dad ku dhow 4,700 kuwaas oo deegaankooda ay la qeybsadaan shinbiraha kan ugu xoogga badan – Gorgorka.
Xaaladda ka jirta halkan oo Gorgoryadu ku hayaan dadka deegaanka ma ahan mid lagu koobi karo ereyada xeesha dheer. Laga soo bilaabo aqalka dushiisa ilaa goobaha ganacsiga, inta u dhaxaysa waxaa aad loola taahay la fal-galka shinbirahan oo adeegyada dadku sitaan ka dhaca: carruurta yarar dharbaaxa ama gaarsiiya halis kale.
Kasokow inay leeyihiin kartida ay isku difaacaan, dadkan magaalada ku nool waxay ku jiraan digtooni dheeraad siiba mar walba oo ay ag marayaan Gorgor – waayo isaga oo moodaya in lagu soo socdo ayuu weerarka ku bilaabaa.
Gawaarida iyo guryaha dushooda iyo siiba kuwa laga tagay ama aan loo baahnayn ayay hoy ka dhigtaan. Tani waxaa loo celinayaa geedaha halkan ku yaalla oo aad u kooban. Waxay ku dul dagaan gaadiidyada socda – iyaga oo mararka qaar ka dilaaciya bacaha si ay ula baxaan waxa ku jira.
U dhawaanshaha xeebta dekadda Dutch Harbor, Gorgoryadu waxay doorbideen inay Jaziiradda Unalaska ku noolaadaan oo Kalluun badan lagu dhoofiyo. Waxay sidoo kale ka qaraabtaan goobaha lagu soo qubo qashinka oo ay hubaal u og yihiin inay ka helayaan dhuuni ay cunaan.
Previous: Maqal:- Casharka Tafsiirka Qur’aanka Idaacadda Himilo “Darsiga 84aad”
Next: Daawo sawirrada – Fardaha dunida ugu quruxda badan.